Soomaali Daacish ah oo kaniisado weerari rabay oo lagu xiray Talyaaniga - Caasimada Online
Home Dunida Soomaali Daacish ah oo kaniisado weerari rabay oo lagu xiray Talyaaniga
Soomaali Daacish ah oo kaniisado weerari rabay oo lagu xiray Talyaaniga
Roma (Caasimada Online) – Muwaaddin Soomaali ah oo da’diisa lagu sheegay 20 jir kaasoo qorsheynayey inuu weerarro argagixiso ka fuliyo kaniisado ku yaal dalka Talyaaniga ayaa lagu xiray gobolka Bari.
Qaraxa ayaa la doonayey in lagu fuliyo kaniisado iyadoo qarax weyn lala damacsanaa in lagu weeraro halka lagu magacaabo Basilica of San Pietro ee magaalada Rome iyadoo qorshuhu ahaa in maalmaha Kirishmaska la qaado weerarradaas. Caddeymo la helay oo lagu ogaaday qorshaha ninkaan ayaa keentay in si degdeg ah loo xiro Mohsin Ibrahim omar oo loo yaqaan Anas Khalil.
Xarigga 20 jirkaan Soomaaliga ah ee lagu xiray xabsi ku yaal gobolka Bari maalmihii ugu dambeeyey markii lagu helay dambiyo ah inuu aaminsan yahay afkaar argagixisannimo, abuurid fitno, ka raali-ahaansho fal argagixisinnimo iyo heysasho aalado laga sameeyo qaraxyo oo halis ah. Xaakinka maxkamadda gobolka Bari, Maria Teresa Romita ayaa soo gudbisay caddeymahaan 13kii bishan December.
Anas Khalil ayaa hay’adaha ammaanku u arkeen inuu xiriir la leeyahay kooxda Daacish ee Soomaaliya xiriirna la leeyahay mid ka mid ah hawlwadeennada kooxda. Tani waa caddeymaha kasoo baxay Digos oo ah saldhigga Boliiska ee gobolka Bari.
“Waxaan rajeynaa in kii dila Kirishtaanka, Cadowha Ilaahey inuu yahay walaalkeen, meeshii uu ka yimaadaba haddiiba uu dilayo Kirishtaan waa walaalkeen” 20 jirkaan ayaa hadalladaas yiri markii weerar ka dhacay Strasbourg Decembertii tagtay 11keeda. Sida ay sheegaan baareyaasha ka hortaga argagixisada ee gobolka Bari.